Shiinaha OEM PP Cotton madaxa qubeyska miiraha shaandheeya Core saaraha iyo qeybiye | Xinpaez
OEM PP Cotton madaxa qubeyska miiraha filter filter
Filinka cusub ee shaandhada qubeyska - Wax soo saarka Jiilka 2aad, Adag, Dheeraad wax ku ool ah, Joogitaan Sare
Sifeynta Qubayska - Wixii imputies, miridhku, Boorka, Nemotodes, IWM.
Cimri Dheer - 3-6 Bilood
OEM ODM - Awood Wax Soosaar Sare, Alaabooyin loo habeeyay.
Astaamaha: Sifeynta qubayska
Tirada ugu yar: 1000
In la aqbalo habeynta: OEM, ODM la aqbali karo
Cabir: 70/106/124/118 MM
PP suufka filter Qubeyska Core
Tayada maadada: fiber-ka polyesterka (wax PP)
Waqtiga beddelka: 3 illaa 6 bilood, waxay kuxirantahay tayada biyaha, caadiyan 10000L.
Waxqabadka: Sifee waxyaalaha nijaasta ah ee kolloidhka ah, dhoobada, miridhku, ukunta cayayaanka, wasakhda dabiiciga ah, iwm
Heerka Kala-bixinta: 5 Micron
Cunsurka shaandhada suufka 'PP' wuxuu ka sameysan yahay cusbi polypropylene ahaan maadada ceyriinka ah si loo sameeyo fiiloyin, kuwaas oo ay ku dhagan yihiin fiber-ka laftiisa. Qaab dhismeedka curiyaha shaandhayntu waa qaab-dhismeed leh fiilooyin lakab adag oo dusha sare ah, fiilooyin lakab hoose oo dhuuban, lakab bannaanka ka baxsan, iyo lakab gudaha ah oo adag. Kala shaandhaynta banaanka iyo gudaha, markay u dhawdahay lakabka hoose ee curiyaha shaandhada, inta yar ee daloolka duubku, ayaa ka sarreeya saxnaanta shaandhaynta.
Shaandhayntan qotada dheer ee garaadleyda ah waxay sameysay saamayn haraaga shaandhada oo saddex-cabbir ah, taas oo noqon karta qaab-dhismeed isku dhafan oo aad u tiro badan, lehna wasakh ballaadhan oo haysa; PP dhalaalaya cufan walxaha filter waa xoog badan yahay, marka marinka filter iyo farqiga cadaadiska outlet waa 0.4Mpa, heerka socodka sifeynta waa weyn yahay, iyo farqiga cadaadisku waa yar yahay, xudunta filter The aan la rogrogin; Waxay midaynaysaa dusha, qoto dheer, qalafsan iyo sifeyn wanaagsan; Waxay leedahay astaamaha qulqulka ballaaran, iska caabbinta daxalka, cadaadiska sarreeya. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xannibo waxyaalaha waaweyn sida miridhku, ciidda iyo ukunta cayayaanka ee biyaha ku jira.
Ka hadalka beddelka, Sababtoo ah curiyaha shaandhada suufka 'PP' wuxuu ka tirsan yahay qaybta miiraha miiraha koowaad marka qubeyska, in ka badan 80% nijaasta ayaa lagu sifeyn doonaa marxaladan, iyo in wasakhda badan la sifeeyo, sida ugu fudud ayaa walxaha shaandhada xannibnaansho. Sidaa darteed, nolosha curiyaha suufka PP waa mid aad u gaaban. Cunsurka miiraha ayaa laga yaabaa inuu u baahdo in la beddelo in ka badan laba bilood meelaha tayada biyaha liita, meesha ugu dheer ee tayada biyaha fiicani ka badnaan mayso lix bilood. Sidaa darteed haddii aad ku iibsato madaxa qubeyska oo leh walxaha shaandhada PP, si looga fogaado wasakheynta labaad, waxaa lagugula talinayaa inaad beddesho xudunta miiraha 3-6 bilood kasta ama wixii la mid ah.
Sida loo xukumo tayada walxaha shaandhada suufka PP
1. Fadlan hubi miisaanka. Waxaan ku cabbiri karnaa gacmaheena. Miisaanka culus, ayaa sare u qaada cufnaanta fiber-ka walxaha shaandhada. Tayada sidoo kale waa ka fiican tahay.
2. Fadlan hubi maaddada. Markaad dooranayso shaandhada, waa inaad rajo ka qabtaa walxaha sheyga shaandhada. Midabka xudunta shaandhada caadiga ah waa mid le'eg oo dusha sarena wuu siman yahay. Dusha sare ee shaandhaynta liidata maaha midab ahaan midab ahaan iyo muuqaal ahaan mid liita.
3. Is-qancin. Guud ahaan, waxay sare u kacdaa cufnaanta fiber ee shaandhada. Sida ugu fiican ee waxqabadka riixitaanka, ayaa ka sii fiicnaanaya tayada udub-dhexaadka suufka PP. Waxaan ku xukumi karnaa dareenka gacmaha, sida uu u xoog badan yahay dareenka gacantu, ayaa ka sii fiicnaanaya waxqabadka cadaadiska.
Guud ahaan waxaan bixinnaa afar cabbir, adeegyada OEM iyo ODM ee la heli karo. Cabir kasta ha lahaadee,
waanu u habeyn karnaa. Waqtigan xaadirka ah waxaan haynaa 10 khadadka wax soo saarka ee ka shaqeeya PP Core oo wax soo saarkeedu yahay 2 milyan bishii.
Hore: OEM udgoon Faytamiin C kaydadka shaandhada maydha
Xiga: Tiknoolajiyada cusub ee Cadaadiska Sare ee Shaandhaynta Gacanta
madaxa qubeyska ugu fiican
Tiknoolajiyada cusub ee dhoobada gacanta ee dhoobada dhoobada ...